हरेकले आफ्नो नीजि अं’ग का लागि गर्ने यी ७ गल्तीहरु जान्नुहोस्, जीवनका लागि आजै सुधारौ – Jagaran Nepal
काठमाडौं । सामान्यतया मान्छेहरु आफ्नो नीजि अं’गका बारेमा खुलेर कुरा गर्न मान्दैनन् । तर यस विषयमा जानकारी हुनु राम्रो हुने धेरैको बुझाई रहेको छ । आज हामी महिलाहरुको नीजि अं’गको हेरचाहलाई लिएर केही टिप्स दिन गइरहेका छौं ।
धेरै व्यक्तिहरू विश्वास गर्दछन् कि तपाईको नीजि अं’ग स्वयंले सफा गर्नुपर्ने शरीरको एक भाग हो । यो सत्य हो, तर पनि यसको हेरचाह आवश्यक पर्दछ । यसको बाबजुद पनि हामी केहि राम्रो गर्न खोज्दा गल्तीहरू गर्छौं जसले हामीलाई केही समस्यातिर धकेल्छ । जसको कारण महिलाको नीजि अं’गले धेरै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ ।
प्रसूति र मातृत्व अस्पताल, पुणे भारतकी चर्चित स्त्री रोग विशेषज्ञ डी प्रतिमा थम्केका अनुसार, नीजि अं’गको स्वच्छता कायम राख्न र नीजि अं’गको अस्वस्थता पैदा गर्न महिलाहरूले गर्ने सबैभन्दा गल्ती डचिङ्ग हो । डचिङ्ग भन्नाले नीजि अं’गमा दिइने वाफ र बृहत सफा हो ।
उनी भन्छिन्, ‘तपाई आफ्नो नीजि अं’गलाई सफा राख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, तर तपाईले तपाईको नीजि अं’गको सम्पूर्ण बायोमलाई राम्रो ब्याक्टेरिया नष्ट गरिरहनु भएको छ ।’ तर डचिङ्ग बाहेक, डा. थाम्केले अरु सातवटा गल्तीहरूको बारेमा वर्णन गर्नुभयो जुन हाम्रो नीजि अं’गको लागि हानिकारक हो ।
१, फोहोर हातले यसलाई छुनु
आफ्नो नीजि अं’ग छुनु अघि हात धुनुहोस् । फोहोर हातको अर्थ ब्याक्टेरिया र भाइरसहरूको लागि खुला निमन्त्रणा जस्तै हो, जसले तपाईंको नीजि अं’गको बायोम नष्ट गर्न सक्छ । वास्तवमा, यदि तपाईं नुहाउनका लागि लोफ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तल प्रयोग गर्नु अघि यो पूर्ण रूपमा सफा भएको निश्चित गर्नुहोस् । तपाईको हात नै तपाईको नीजि अं’गको विरामको पहिलो माध्यम बन्नसक्छ ।
२, शाररीक सुखभो’गपछि बाथरूममा जानुहोस्
शाररीक सुखभो’गपछि सामान्य गल्ती गर्दा मूत्र पथ संक्रमण को सम्भावना हुन्छ । कोही सुखभो’गपछि तत्कालै बाथरुम जाने गर्दैनन् । यसले तपाईंको नीजि अं’गमा रहेको ब्याक्टेरिया खाली गर्दछ । सम्बन्धपछि आउँने चिप्लो पर्दाथ क्षारीय स्वभावको हुन्छ र यसले तपाईंको नीजि अं’गको सुरक्षात्मक संयन्त्रलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ । त्यसकारण, शाररीक सुखभो’गपछि बाथरुम जानु र यसलाई बिस्तारै सफा गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
३, धेरै चिनी नखाँनुहोस्
चिनी तपाईको नीजि अं’गको लागि दुश्मन हो, किनकि यसले खमीर (यीस्‍ट) संक्रमणलाई निम्त्याउन सक्छ । यदि तपाईलाई मधुमेह छ भने तपाई अझ सतर्क हुनुपर्दछ । यसैले चिनी र चिनी जन्य खाद्य पर्दाथ रोक्नुहोस् ।
४, सिन्थेटिक कट्टु नगाउनुहोस्
अवश्य पनि, सिन्थेटिक कट्टु लगाउनु तपाईंको नीजि अं’गको लागि कष्टकर हुन सक्छ । किनभने त्यसले पसिना पूरै सोस्न सक्दैन । पसिना एक मुख्य कारण हो जसले तपाईंको नीजि अं’गमा संक्रमण हुन सक्छ । वास्तवमा, पसिना सोस्ने खालको कपडा हाम्रो स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो ।
शरीरबाट आएको पसिना बग्न दिनु नै स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । ता की लगाएको कपडाले जतिसक्दो सोस्न सकोस् । विशेष गरी गर्मीमा तपाईले कपासको कट्टु लगाउनु पर्छ । अत्यधिक पसिना नीजि अं’गमा आउँने समस्या छ भने गैर–औषधीयुक्त ट्याल्कम पाउडर प्रयोग नगर्नुहोस्, किनकि यसले संक्रमणको सम्भावना बढाउँदछ ।
५, सुगन्धित साबुन र स्प्रे प्रयोग गर्नु
सुगन्धित साबुन वा स्प्रे प्रयोग गर्नाले तपाईंको नीजि अं’गको पी’एच सन्तुलन बिग्रन सक्छ र क्लेमाइडिया जस्ता संक्रमण हुन सक्छ ।
६, गलत तरिकाले सफा गर्नु
जब तपाईंको नीजि अं’ग सफा गर्ने कुरा आउँदछ, सधैं अगाडिबाट पछाडितर्फ जानुहोस्, अर्थात् तपाईंको नीजि अं’गबाट पछाडिसम्म धुनुपर्छ । यसको विपरीत, पछाडिको ब्याक्टेरिया अगाडीको नीजि अं’गमा आउन सक्छ, जसले तिनीहरूलाई संक्रमणको लागि अतिसंवेदनशील बनाउन सक्छ ।
७, तपाईंको सेनेटरी प्याडहरू, मासिक कप, र ट्याम्पनहरू परिवर्तन गर्नुहोस्
तपाइँको प्याड वा ट्याम्पन पूर्ण रूपमा भिज्दासम्मका लागि नपर्खनुहोस् । पुरा भिज्दासम्म लगाइराख्नाले यसले चिलाउने लगायत अन्य संक्रमण पैदा गर्न सक्छ । यदि तपाईलाई पिरियडको समयमा अधिक रक्तस्राव छ भने तपाईंले आफ्नो सेनेटरी नैपकिन प्रत्येक ४ घण्टाभित्र परिवर्तन गर्नुपर्दछ । यदि हल्का मासिक धर्म छ भने, यसलाई हरेक ६ घण्टामा बदल्नुहोस् । ट्याम्पनका लागि निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले यसलाई हरेक ४ घण्टाभित्र परिवर्तन गर्नुपर्छ । मासिक कपको प्रयोग गर्दा सुनिश्चित गर्नुहोस् कि संक्रमणबाट बच्न यो पहिल्यै सफा भइसकेको छ ।
यी गल्तीहरू सामान्य छन् तर ध्यान दिएर हेर्ने कुरा के हो भने यदि तपाईं त्यहाँ अप्ठ्यारो महसुस गर्नुहुन्छ भने, आफैलाई उपचार सुरु गर्नुहोस् । यदि तपाईंले संक्रमण अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले डाक्टरलाई भेट्नु पर्छ र आफैलाई जाँच्नु पर्छ । अन्यथा, यो ठूलो समस्या हुन सक्छ ।
त्यसोभए यो कुरा तपाईंको आँखा खोल्न को लागि पर्याप्त छ कि छैन ? महिलाहरू, अब तपाईंलाई थाहा भयो तपाईंले के गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ ? माथि उल्लेख गरिएका गल्तीहरु अब पुनः नगर्नुहोस् किनकी संक्रमणबाट आफूलाई जोगाउन, तपाईंले आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्नुपर्दछ । यो सामाग्री आफुले पढिसकेपछि सबैको जानकारीका लागि सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् । ताकी अरु दिदिबहिनीहरुलाईपनि सहयोग मिलोस् । धन्यवाद